Puntland oo tababar Carmo ugu soo xirtay 1500 oo askari oo ka tirsan booliska Puntland. – Radio Daljir
Carmo, Oct, 22- Dawladda Puntland ayaa tababar usoo xiray ciidamo katirsan booliska Puntland oo muddo sadex bilood ah tababar uga socday kuliyadda ciidanka booliska Soomaliyeed ee degmada Carmo ee gobolka Bari.
Munaasabada lagu soo xirayay tababarka oo ka dhacday degmada Carmo ayaa waxaa ka qaybgalay masuuliyiin katirsan dowladda Puntland oo ay ka mid yihiin wasiirka amniga dawladda Puntland Col: Khaliif Ciise Mudan, wasiiru-dowlaha sharciga madaxtooyada Gen.Yuusuf Axmed Khayr, taliyaha ciidanka booliska Puntland Gen: Cali Nuur Cumar iyo saraakiil kale.
Guddoomiyaha degmada Carmo ee tababarka uu kasoconayay muddooyinkii ugu dambeeyay mudane Xuseen Cawad Cali oo waraysi siiyay Radio Dalijir ayaa waxaa uu sheegay in tababarkan loosoo gabagabeeyay 1500-oo askari oo ka tirsan ciidamada booliska Puntland, waxaana uu sheegay tababarkaan inay dhanka maaliyadda ay ka caawinaysay hay’adda QM u qaabilsan hormarinta hay’adda UNDP.
Guddoomiyaha ayaa dhinaca kale sheegay, inay dhowaan rajaynayaan in tababar loogu qabto kuliyadda ciidanka ee degmada Carmo saraakiisha ciidanka booliska dawladda Puntland, waxaana uu intaasi raaciyay inay tababaradu la xiriiraan baarista dambiyada, sugidda amniga, xiriirka ciidanka iyo shacabka, iyo xeerarka kale duwan ee booliska.
Kuliyadda Ciidanka booliska Soomaliyeed ee degmada Carmo ayaa sidaan oo kale horay tababar ciidan loogu sameeyay ciidamada booliska Puntland iyo Ciidan ka tirsan dowladda Faderaalka ee Somaliya.
Radio Daljir-Bossaso http://daljir.com/